Admin သင့်ချစ်သူကို သင် တကယ်ပဲ ချစ်တာလား…..? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » Admin သင့်ချစ်သူကို သင် တကယ်ပဲ ချစ်တာလား…..?
Admin သင့်ချစ်သူကို သင် တကယ်ပဲ ချစ်တာလား…..?
Posted by အရင့်ရောင် on Jun 23, 2012 in Copy/Paste | 42 comments
Admin သင့်ချစ်သူကို သင် တကယ်ပဲ ချစ်တာလား.....?
စာဖတ်ပရိတ်သတ် အားလုံးကို……ဒီ ဘလော့ လေးမရေးခင်း တောင်းပန်းခြင်ပါတယ်..နော်..။ အမှားများပါခဲ့ရင်ခွင့်လွတ်ပါ.. အမြင်လေးတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော် အတွေးတစ်ခု ကို ချပြရေးသားလိုက်တာပါ….။
အချစ် ကြောင်းကို ပြောမယ်ဆိုရင်း.. ကျွန်တော်လည်း သေသေချာချာ တော့ မသိပါဘူး..။ အချစ်ဆိုတာကို မသိဘူးဆိုပေမယ့် ကျွန်တော်ချစ်သူကိုတော့ ကျွန်တော် တကယ်မြတ်နိုးစွာနဲ့ ချစ်မိတယ် အချစ်စစ်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ပြောရဲပါတယ်..။
အပြင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ…. ယခုမြင်တွေ့နေရတယ်.. လူငယ်တွေလည်းသိကြမှာပါဗျာ…. ချစ်သူထားတယ်.. ပြီး ကွဲတယ် ပျက်တယ်..ဒါတွေဟာ.. ခဏခဏ ဆိုသလို ကြားနေရတာပါလေ..။ မိန်းကလေးတွေကို ယောင်္ကျားလေးတိုင်း ချစ်ရေးဆိုကြပါတယ်..။
ငါနင့်တစ်ယောက်ထဲကို ပဲ တကယ်မြတ်နိုးတာပါ
ငါ နင်တစ်ယောက်ကလွဲရင် အခြား ဘယ်သူမှ မလိုချင်ဘူး
ငါ နင့်ကို ဘာနဲ့ မှ မလဲနိုင်ဘူး
အစရှိတဲ့ စကား လုံးတွေကိုလည်း ပြောဖြစ်ကြမှာပါ..။ ဒါပေမယ့် အပြောနဲ့ အလုပ်နဲ့ က သိပ်မညီဘူးဗျ…. အချစ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရင်
နားလည် မူဆိုတာ က အရေးကြီးပါတယ်.. နားလည်မူမရှိရင်တော့ အချစ်ဆိုတာ အလကားပါပဲ…။ ချစ်တယ်လို့ပြောကြပြီးမှာ အသဲကွဲခြင်းဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဟာ ပေါ်ထွက်လာတယ်..။ ချစ်ပြီးတာနဲ့ မုန်းကြရောတဲ့လား….ပျက်ကြရောတဲ့လား.. ဒါဆို အချစ်စစ်ဆိုတာ ဘယ်နားမှာရောက်နေမလဲ…..ချစ်ရေးဆိုခဲ့တုန်းက စကားလုံးတွေကလည်း.. မုသားတွေ ဖြစ်ရကုန်ပြီပေ့ါ..။
မိန်းကလေးတွေကို ပန်းလေးတွေ နဲ့ နိူင်းကြပါတယ်…..။ ပန်းလေးတွေ ကိုလည်း တန်ဖိုးထားသင့်ပါတယ်လေ…. ပန်းကို ခြွေရက်သူယောကျာင်္းသားဟာ လည်း.. တကယ်ချစ်တယ်ဆို… တန်ဖိုးထားရမှာပါပဲလေ..။ ခုခေတ်မှာက .. ပန်းကို ခြွေတယ် မလိုရင်း ပစ်တယ်.. ဒူးနဲ့ မျက်ရည်သုတ်ရတာ မိန်းမသားတွေ ဖြစ်နေကြရတယ်..။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းလည်း ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ပါ.. ဒါပေမယ့် ယောကျာင်္းတွေ အားလုံးကို ယောကျာင်္း ပီသ စေချင်တာပါ…။
ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့ခါ.. ကြားကြားနေရတာတွေရှိတယ်…..
ငါက ဘယ်ကောင်မလေးကို ဘယ်လို ထားခဲ့တာကွ
ငါက ဘယ်ကောင်မလေးကို ဘယ်လို အသဲခွဲခဲ့တာ
ဟို မာန မင်းသမီးကို ငါချိုးပြီး lesson တွေ ပေးခဲ့တာလေ..
ဒီစကားတွေကိုပြော….. ဂုဏ်ယူနေသော ယောကျာင်္းလေးတွေဟာ….. ယောကျာင်္း ပီသ တယ်လို့ ပြောချင်ပါသလား..? မိန်းကလေးတွေကို တန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ်……။ ယောကျာင်္းတွေ မကောင်းကြောင်းပြောပြနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး.. မိန်းကလေးတွေလည်း… မာယာတွေနဲ့ လည့်စားအရူးလုပ်သူ တွေ ရှိပါတယ်…။ သူတို့ မာယာပဲ ထားထား ကိုယ့်ကိုယ် အရူးလုပ်လုပ် ကိုယ်က ချစ်ခဲ့တာပဲလေ….. သူထားရင်းလည်း ခံရမှာပါ…. ဘာလို့လဲ ကိုယ်က ချစ်နေတာလေ…..။ ဒါကို သည်းမခံနိုင်လို့ ပျက်မယ် ခွဲမယ်ဆိုရင် လိမ္မာပါးနပ်စွာနဲ့ …… ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်…။ အထင်လွဲမူတွေ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်လို့ပါ….
မိန်းကလေးနဲ့ ယောကျာင်္းလေးဟာ ချစ်မိကြပါပြီ…. ဒီလိုဆို နားလည်မူ ခွင့်လွတ်မူ ထောက်ထားမူ ငဲ့ညာမူတွေ အပေးအယူ မျှတမူတွေဟာ လိုအပ်ပါတယ်…။ နားလည်မူနဲ့ အပေးအယူမမျှတပဲ.. ထပ်တူမကျရင်တော့…. အချစ်ဆိုတာ .. ပျော်စရာမကောင်းတော့မှာ အမှန်ပါ….။
ပန်းလေးတွေကို .. တန်းဖိုးထားစေချင်တာ တစ်ခုပါပဲ..ဗျာ…..။ အရှက်နဲ့ လူလုပ်နေကြရတဲ့ …မိန်းမသားတွေ… အဓိကကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို နားလည် တန်ဖိုးထားစေချင်တာပါ…..။ (အရှက်မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေ တော့ မပါဘူးပေါ့ဗျာ ..)
ချစ်သူနဲ့ ကွဲတယ် ပျက်တယ် ဆိုကတည်းကိုက… တကယ်မချစ်ကြလို့ ပျက်ကြရတာပါ..။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်မူမရှိတာတွေ… မငဲ့ညာမူတွေ .. ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ကြည့် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မူတွေကြောင့် အများစုဟာ လမ်းခွဲပန်းတိုင်ကိုသာ ရောက်ရှိသွားကြတယ်…….။
ယောကျာင်္းလေးတွေ ကိုယ့်ချစ်သူကို တကယ်သာချစ်တယ်ဆို ကိုယ်က ဘယ်တော့မှ မထားပါဘူး….။ သူမကောင်းလဲပဲ အကျိုးကြောင်းပြောပြပြီး.. ညှိယူသင့်ပါတယ်….။ သူထားတာကိုပဲ ခံလိုက်ပါ ကိုယ်က ဘယ်တော့မှ မိန်းကလေးတွေကို မထားပါနဲ့..။ ပြောကြမှာပါ…..( ငါတို့က ယောကျာင်္းကွ.. ငါတို့ ယောကျာင်္းသိက္ခာ ငါတို့ ယောကျာင်္းမာန တွေ ရှိသေးတယ် ဒါတွေ ဘယ်မှာထားမလဲဆိုတာတွေပေါ့…) အဲ့ဒါတွေကို ခဏလေး ဖယ်ပီး ရိုးရှင်းစွာ မြင်ကြည့်လိုက်ပါ သင်သူ့ကို မချစ်ခဲ့ပေဘူးလားး?
သူက ကိုယ့်ကို ထားခဲ့တယ်ဆို သူ့အမှားပါ…။ ကိုယ်က သူ့ကို သာ ထားခဲ့ရင် ကိုယ့်အမှားပါ…. ကိုယ်က သစ္စာရှိသူလုပ်မှာလား..သစ္စာဖောက်သူလုပ်မှာလား…ဆိုတာကို ပြန်တွေးပါ…..။ယောကျာင်္းသားအများစုဟာ .. မိန်းကလေးတွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် အရင်စ ထားခဲ့ခြင်ကြတယ်…. သူမထားခင် ငါ ထားတာကွ.. ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေကြတာ ရှိတယ်..။ မှားနေတာပါ တကယ်ဆို သူတို့ … သစ္စာ ဖောက်သူဖြစ်နေတာ မသိကြရှာဘူးလေ….။
ချစ်သူတွေ မကွဲ မကွာ ပဲ …… အချစ်စစ်ဆိုတာ မြင်ချင်မိတယ်ဆို နားလည်မူလေးနဲ့ .. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ညှိယူကြပါ..။သင်တို့ တကယ်ကို ပျော်ရွင်ကြရမှာပါ……. အတ္တတွေ မာနတွေ ဒေါသ တွေ ခဏလောက် ဖယ်ထားပါ..။
ကျွန်တော် ကျွန်တော်ချစ်သူကို အရမ်းချစ်ပါတယ်…။ သူက .. ကျွန်တော် စိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုပဲ တွေးနေသလို ကျွန်တော်ကလည်း သူပျော်ဖို့ကိုပဲ တွေးနေတက်တယ်…….။ ပွင့်လင်းစွာ တိုင်ပင်ကြတယ်…… ရိုးရှင်းစွာနဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ် တစ်ခုခု လုပ်မယ်ဆို အသိပေးပြီး ညှိယူကြတယ်…..။ မျှမျှ တတ တွေးမိတာလေးတွေ…ပေါ့…..ငါဒါကို လုပ်မယ်ဆိုင့ါချစ်သူ ကြိုက်ပါ့မလား…….အမြဲတွေးမိတယ်…။ တကယ်ချစ်တဲ့သူတိုင်းက ကိုယ့်ချစ်သူကိုတန်ဖိုးထားပြီး.. ချစ်သူ… အတွက် ချစ်သူကို အမြဲ ဦးစားပေးကြမှာပါ….။
-သီချင်းဆိုတာကိုဝါသနာပါသူ … ချစ်သူက သ၀န်တိုတက်ပြီး အရမ်းချစ်တက်သူဆို.. သင် ဘယ်ဟာကို ရွေးမလဲ…?
ကျွန်တော် အလှည့်တုန်းကတော့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် သီချင်းဆိုဖို့ တိုင်ပင်ခဲ့ဖူးတယ်.. သူအသံကို ကြည့်တာနဲ့ သိပါတယ်..ဒါနဲ့ ပဲ ကျွန်တော်….. မောင်သီချင်းမဆိုတော့ပါဘူး… မေ့အတွက်ပဲဆိုမယ်.. မေ့ကိုပဲ ဆိုပြမယ်….. အောင်မြင်မူတွေရမှ မောင်ပျော်ရတာမှမဟုတ်တာ.. မေ့ကို ဆိုပြနေတာဟာလည်း သီချင်းဆိုရတာပဲလေ…..။ ဒီလိုပြန်ဖြေပြီး ညှိတော့ ကိုယ်လည်းပျော်တယ်… ချစ်သူလည်း ၀မ်းသာသွားတယ်…..။
– game ကစားသူဟာ.. ဂိမ်းကို အရမ်းကစားမှာပါ…… ချစ်သူနဲ့ ဂိမ်း ဘယ်ဟာကိုရွေးမလဲ……
ကျွန်တော် dota ကို play ပါတယ်….. ဒါပေမယ့် ချစ်သူ လိုင်းပေါ်တက်တာနဲ့ …. ချစ်သူ… နဲ့ပဲ ပြောပြီး ဂိမ်းကို out လိုက်ပါတယ်..။ နောက်ဆုံး ဂိမ်းတောင် မနှိပ်တော့ဘူး ဖြစ်သွားတယ်…။
-ဆေးလိပ်တို့ အရက်တို့ ကွမ်းတို့ ကတော့ ကျွန်တော်မစားမသောက်တက်လို့ မသိဘူး.. ဒါပေမယ် ချစ်သူနဲ့ ဒါတွေ သင်ဘယ်ကိုရွေးမလဲဆိုတာတော့ မေးချင်မိပါသေးတယ်…။
ကိုယ်သာ တကယ်ချစ်တယ်ဆို ချစ်သူစိတ်ချမ်းသာဖို့… ငဲ့ညာပြီး… အလျှော့ပေးမှာပါ….. ဒါကို ချစ်သူက နားလည်ပြီး..အချစ်တွေ တိုးလို့… ပျော်ရွင်တဲ့ ချစ်သူတွေ .. ဖြစ်ကြမှာပါ…..။
လူငယ်တွေ အများစုဖြစ်နေကြတာကတော့ တကယ်ချစ်တယ်သာပြောတာ တကယ်မှ မချစ်တာပဲလေ..သူကတင်း ကိုယ်ကလည်း တင်း ပျက်ထွက်ကုန်တော့တာပေါ့…
ကျွန်တော်ဒေါသ အရမ်းကြီးပါတယ.် စိတ်လဲကြီးပါတယ်….. ချစ်သူက စကားမပြောပဲ…ငိုသွားတာနဲ့ ကျွန်တော် နေရထိုင်ရခက်လာတာအမှန်ပါ… တကယ်ချစ်မိတော့… ဒေါသတွေ.. ဟာ ပျောက်ကုန်ပြီး.. သူ့ကို အလျှော့ပေးလိုက်တာပါပဲလေ..။ ဒီလိုဆိုတော့ ခဏလေးနဲ့ ပြန်ဖြေသာသွားတယ်လေ….ချစ်သူပျော်တယ်ဆို ကိုယ်လည်း ပျော်ပြီး စိတ်ချမ်းသာနေမိတာဟာ အမှန်ပါ……။ သူနားလည်မယ် ကိုယ်လည်း ခွင့်လွတ်မယ်.. တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စိတ်တွေကို ခွင့်လွတ်ပြီး ညှိယူလိုက်ရင်း…… အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းမှာပါ.. သံယောဇဉ်တွေလဲ ဒီထက်မကတိုးပြီး အရမ်းကိုချစ်တဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြမှာပါ…………..။
အဓိက ပြောချင်တာကတော့ ယောကျာင်္းလေးတွေဟာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို တန်ဖိုးထားပါ….။ မြတ်နိုးပါ… တကယ်အချစ်စစ်နဲ့ချစ်ပါ..။ မိန်းကလေးတွေကလည်း ကိုယ့်ကို သူက တကယ်ပေးဆပ်ပြီး တကယ်ချစ်တယ်ဆို အနိုင်မယူချင်ပဲ.. သူ့အချစ်ကိုတန်းဖိုးထားပါ…… အနိုင်လိုချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်..ဆိုရင်း ငါဒီလိုလုပ်လို့ ငါချစ်တဲ့သူ ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာကိုတွေးပါ..။ ဒီလိုဆို ပျော်ရွင်သာယာလှပတဲ့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြမှာပါ……။ လွမ်းခွဲခြင်းပန်းတိုင်ကို မရောက်ပဲ ဆုံဆည်ခြင်း ပန်းတိုင်ကိုသာ ကျွန်တော် ရောက်စေချင်ပါတယ်…….။
ချစ်သူ.. တိုင်းကို ကျွန်တော် ဆုံဆည်းစေချင်ပါတယ်…… ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော်ချစ်သူ နားလည်မူတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားသလို … ချစ်သူတိုင်းကိုလည်း….. ဒီလို လေး တည်ဆောက်စေချင်ပါတယ်လို့ အကြံပြုပြီး.. လမ်းခွဲခြင်းတွေမရောက်မယ့် နည်းလမ်းလေး ကို ပေးတာပါ..။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်… ကိုယ်က တကယ်ချစ်တယ် သူကလည်း ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်.. အချစ်စစ်ဆိုတာ အမြဲ ( = ) ညီမျှခြင်းကျနေမှ .. ဖြစ်လာတာပါ…..။
ချစ်သူတိုင်း.. တကယ်ချစ်သူတိုင်း အထင်လွဲမူတွေ.. ပူပင်မူတွေ.. သောကတွေ နဲ့ ကင်းဝေပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ယုံကြည်မူတွေနဲ့ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ……..။ ဒါမှလည်း.. ပျော်ရွင်သော ချစ်ခြင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ကြမှာပါ….. အချစ်ဆိုတာ မပူလောင်ပါဘူး…… တကယ်သာ အချစ်စစ်ဖြစ်သွားရင်း အရမ်းကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုပါ…… မယုံရင်း ကျွန်တော်ကောင်မလေးကို မေးကြည့်ပါ…… ခစ်ခစ်. အလကားစတာနော်….။
ကျွန်တော်က တော့ ကျွန်တော်ချစ်သူကို အမှန်တကယ် စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းနဲ့ ချစ်ပါတယ်…
တကယ်ချစ်သောသူတိုင်းဟာ ပျော်ရွင်တဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင်ပြီး.. ထာဝရပျော်ရွင်သော
တူတူ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ ဗျာ…
ဖူးစာရှင်လေး မှ တင်ပြလိုက်ရပါသည်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး မှတ်သားသွားပါတယ် … နောက်တစ်ခေါက် ပြန်ဖတ်လိုက်ဦးမယ်နော် ..
ဘူဒွေအချစ်ခံချင်လဲ(မှတ်ချက် ။။ ကောင်မလေးများသာ)
အူးလေးက တစ်ဂယ်ဂျီးကို ချစ်တာပေါ့နော်..
အနော်လဲ ဂယ်ဂျီးကို ခြစ်ဘာဒယ်
မောင် စား says:
ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းခလေးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုအရင့်ရောင်ပြောသလို တကယ်ချစ်တတ်ပြီး တန်ဖိုးထားတတ်ရင်
ထားခဲ့တဲ့သူက နောက်တော့ နောင်တတွေ ရနေမှာပါ…
တန်ဖိုးထားပြီးချစ်တတ်တဲ့ သူတွေ များပါစေဗျာ….
ကိုအရင့်ရောင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို လေးစားပါတယ်။ တော်သေးတယ် ဒီလိုစိတ်ဓါတ်မျိုးတွေ မရှိတော့ဘူးတောင် ထင်ထားတာ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လူတိုင်း ဒီလို စိတ်ဓါတ်လေး ပိုင်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် က အချစ်နဲ့ မတွေ့ ဖူးသေးကြသူ လူပျိုပေါက်လေးတွေ ၊ သမီးရည်းစားမထားဖူးကြသူလေးတွေ ကို ၊ လုပ်သင့်တာနဲ့ မလုပ်သင့်တာလေးတွေ ကို အကျိုးအကြောင်း နဲ့ ရှင်းပြကြရမှာပေါ့နော….။
အူးဇင်းယဲ အနေနဲ့ဂဒေါ့ အခြစ်ဆိုတာကို
ငယ်ငယ်ဂ နေပူခြစ်ခြစ်တောက်မှာ ဦးထုပ်မပါဘဲ ရေခဲခြစ်ဆိုင်သွား အပြန်အပူရှပ်ပီး ကိုယ်တွေခြစ်ခြစ်တောက်ပူ ပီးတော့ဖျားခဲ့တာက လွဲလို့ အခြစ်အကြောင်းကို မသိခဲ့ပါ။ကျန်သေးဒယ် အုန်းခြစ်နဲ့ ငဖယ်ခြစ်လောက်တော့ သိတယ်…
အခြစ်ကို တားဖို့ထားဖို့ကတော့ ကောင်းတဲ့ အယူအဆပါ ကောင်းပါတဒယ်…ကောင်းလော့တေး
သို့ပေသိ ခုခေတ်မှာတေဒေါ့ ဒဂါ၊ဒဂါမ ပေါက်စနတွေက်နေ ကြီးဂေါင်ကြီးမားတွေအထိ အခြစ်ဆိုဒါ အကြောင်းပြုပြီး လက်ခပ်နှစ်ဖက်ကို မြိုင်မြိုင်ဂျီး အပြိုင်အဆိုင်တီးလျှက်ရှိပါကြောင်း………..
အရင့်ရောင် post ကိုဖတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေကိုသနားသွားပြီ
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြည့်စုံချင်ပါ၏ ။
အဆင်မပြေမှုဆိုတာတော့ ရံဖန်ရံခါ ရှိတက်ပါတယ်။
အော်ထူးဆန်းတယ်နော် ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေလဲရှိတာလဘဲကိုးး ၀မ်းသာမိပါတယ် အားကျမိပါတယ် အဲဆန္ဒရှိရင်ပြောပါနော် ပြတိုက်ထဲထည့်ထားချင်လို့ပါ
အော်ထူးဆန်းတယ်နော် ဒီလိုမျိုးချစ်သူတွေလဲရှိတာဘဲကိုးး ၀မ်းသာမိပါတယ် အားကျမိပါတယ် အဲဆန္ဒရှိရင်ပြောပါနော် ပြတိုက်ထဲထည့်ထားချင်လို့ပါ
ခေါင်းစဉ်ရှေ့ မှာ admin ဆိုတာကြီး ပါနေလို့ ၊ ဘာများပါလိမ့်လို့ ..
“ ချစ်ကြမယ်ဟေ့ကောင်းကောင်း ” လို့ ၊ ကျုပ်က ခေါင်းစဉ်ပြောင်းပေးခဲ့တယ်နော
အလေးနက်မထားတဲ့ သူ ကတော့ ပျော်ရွှင်စရာဟုဆိုတက်ပါတယ်
ဝေဒနာ လို့ ဆိုကြပြန်တယ် နော်
အင်း… သူလည်း ငါ့လို အသဲကွဲနေတာပါလား…
ချစ်သူ.. တိုင်းကို အရင့်ရောင် ဆုံဆည်းစေချင်ပါတယ်…… ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ချစ်သူ နားလည်မူတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားသလို … ချစ်သူတိုင်းကိုလည်း….. ဒီလို လေး တည်ဆောက်စေချင်ပါတယ်လို့ အကြံပြုပြီး.. လမ်းခွဲခြင်းတွေမရောက်မယ့် နည်းလမ်းလေး ကို ပေးတာပါ..။ တစ်ခုတော့ရှိတယ်… ကိုယ်က တကယ်ချစ်တယ် သူကလည်း ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်ဖို့တော့လိုမယ်နော်.. အချစ်စစ်ဆိုတာ အမြဲ ( = ) ညီမျှခြင်းကျနေမှ .. ဖြစ်လာတာပါ…..။
ကိုအရင့်ရောင် … ကြည့်နေလို့ အကောင်းမှတ်တယ် … ဟုတ်စ ..
ရွာထဲက လူတွေကို .. ရေးပြချင်သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ … ကဗျာရေးလိုက် ၊ စာရေးလိုက်နဲ့ ……. ရည်ရွယ်တာက .. တယောက်တည်း ဖတ်ဖို့ …. ။
သူ့ချစ်သူက ရွာထဲက ရွာသူတစ်ယောက်ပါဗျို့ ………… သိချင်လျှင် ပရိုက်ဗိတ်မေးလ်ကနေ ပြောပြပါမယ် … ။ ဖုန်းဆက်မေးလျှင်လည်း ပြောပါမယ်ဗျို့ …. ဟိဟိ .. ချွန်ပြီး လစ်ဘီ ။ ဒက်ဂလောက် ဒက်ဂလောက် ။
ရင်ထဲက ဆန္ဒတွေကို ချရေပြတာပါနော်
နင် ပြောတဲ့ ( ချစ်တယ် ) ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းကဘာလဲ…
တကယ်ချစ်တဲ့ အချစ်စစ်တွေ ခိုင်မြဲပါစေလို့…
အရင့်ရောင် ရဲ့ ရင်ထဲက အချစ်တွေက
အရင့်ရောင် ချစ်သူအပေါ်မှာ မူလအရည်အသွေးအတိုင်း
ဒီထက် မိုက်တဲ့ ၊ လန်းတဲ့ စာသားတွေက
အရင့်ရောင် ရင်ထဲက နှလုံးသားစာမျက်နှာတွေမှာ ရှိနေသေးပါရဲ့လေ
အရင့်ရောင် ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေကို
သူ့ အတွက် အမြဲတမ်းထာဝရ ရှိနေမှာပါ။
အရင့်ရေ ပေါ်တင်သာဖောက်ချချစ်လိုက်တော့ အချစ်စစ်မှာ တကယ်ချစ်ရင်ပွင့်လင်းရတတယ် အချစ်ရဲ့ နိဂုံးက လက်ထပ်တာပဲဖြစ်ပါစေ …….ဆုမွန်ချွေလျှက် ……
အော်.. .အချစ်ရဲ့ နိဂုံး ရောက်သွားရှာဘီကိုး …
သနားထှာ ..အချစ်မခံရရှာတော့ဝူးပေါ့ ….အေးလေ…
ကိုဂီရေ.. မခိုင်က အချစ်ရဲ့ နိဂုံးက လက်ထပ်တာလို့ ပြောပေမယ့် … အခု လက်ထပ်ပြီးတော့လည်း .. နိမဂုံးနိုင်သေးဘူးလေ .. ဟိဟိ …. ဖန်မလီ မန်ဘာတိုးဖို့ …. ဘောလုံးတသင်းစာပြည့်အောင် ကြိုးစားနေလေရဲ့ .. ဟိ
မခိုင်ကအခုမှ စာကိုယ်ပဲရောက်သေးတယ် နိဂုံးမရောက်သေးဘူး …….
ယောက်ျားကျား၊ မိန်းမမ ဘယ်သူမဆို ချစ်လို့ရတဲ့လူကိုပဲ ချစ်သူလုပ်ကြတာကောင်း၏
ကိုယ်(သူကို့ရော၊ သူ့နောက်ကအရာတွေရော)ချစ်နိုင်မယ့်သူ၊ ချစ်လို့ရမယ့်လူကိုပဲ လက်ခံတာကောင်း၏
ကျုပ်အဖို့တော့ … လောကမှာ အကျိကိုသာ အချစ်ဆုံး….
ပုံတွေက တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံ မတူသလိုပဲ